Infographics Ahịa | Martech Zone
Nchịkọta, ịre ahịa ọdịnaya, ịre ahịa email, ịre ahịa igwe, ịre ahịa mgbasa ozi na teknụzụ na teknụzụ na Martech Zone
Afọ ole na ole gara aga bụ ihe na-atọ ụtọ maka ndị ọchụnta ego ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị na-achọ ịzụlite azụmahịa ecommerce. Afọ iri gara aga, ịmalite ikpo okwu ecommerce, ijikọta nhazi ịkwụ ụgwọ gị, ịgbakọ ọnụego ụtụ isi nke obodo, steeti, na nke mba, iwulite akụrụngwa ahịa, ijikọ ndị na-eweta mbupu, na iweta usoro ị na-eji arụ ọrụ iji bulie ngwaahịa site na ire ere nyefe were ọnwa. na ọtụtụ narị puku dollar. Ugbu a, na-emepe saịtị na ecommerce
Ọ bụrụ na ịnwetụbeghị ohere iji jikọta ngwọta nhazi ịkwụ ụgwọ, ị nọ na ahụmịhe mmụta mmụta. Ndị na-akwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ nwere ọtụtụ atụmatụ na onyinye… site na ụgwọ, ogologo oge ịkwụ ụgwọ gị ga-aga, na ahụmịhe ọpụpụ nke onye ọrụ, nkwado ụwa, mgbochi aghụghọ, yana akụrụngwa maka inyocha ego gị. 2Checkout bu oru ugwo nke sitere n’igwe ojii nke na eme ka mgbanwe n ’ahia intaneti di elu site n’inye ego gburugburu uwa